Shakiga Soo Kala Dhexgalay Ninka Maraykanka Ee Magacyada Badan Omar Shafik Hammami (Al-Ameriki ) Iyo Al-shabaab Oo Abuuray Dareen Cabsiyeed – Araweelo News Network (Archive)
Somalia(ANN)Fariin shaki iyo dareen cabsiyeed xanbaarsan oo lagu baahiyay shebekada Twitterka , ayaa sababtay in ururka Al-shabaab ka hadlaan fariintaa muuqaalka ahayd ee uu soo diray Abu-mansur Al-amriki oo ka tirsan ajaanibta ka bar bar dagaalama Al-shabaab, taas oo uu ku sheegay
in uu cabsi ka qabo khatar kaga timaada kooxda uu ka tirsanayahay ee Al-shabaab. kadib markii sida uu sheegay uu khilaaf soo kala dhex galay, isaga iyo hogaamiyayaasha kooxdaa.
Al-shabaab ayaa sheegay in aanay jirin wax khatar ah oo soo wajahday Al-amriik, islamarkaana uu nabad qabo kuna sugan yahay ammaan iyo barwaaqo. Bogga ay ku leeyihiin shabakadda Twitterka ayey kooxda Al-Shabaab ku faafiyeen fariimo dhowr ah oo ay arintaa kaga hadlayaan, kuwaas oo ay kamid ahaayeen weedhahan oo lagu yidhi, ” Waxan hubnaa inaysan jirin wax khatar ah oo walaalkeen Al-amriki uga imanaysa dhinaca mujaahidiinta, wuxuuna weli ku raaxeysanayaa sharafta walaaltinimada Islaamka”
Al-shabaab ayaa sheegtay inay la yaaban yihiin fariinta muuqaalka ah ee uu Abu-mansur internetka ku faafiyey ee uu ku sheegay in naftiisu ay khatar ku jirto. “Xarakatu Shabab Al-mujaahidiintu waxay la yaabantahay fariinta uu Abu-mansuur internetka ku faafiyey ee ah in naftiisu ay khatar ku jirto” weedhahan ayaa ka mid ahaa fariimihii ay shebekadda Twitterka soo dhigeen.
Al-ameriki iyo saaxiibadii keligii ayaa wejigiisu muuqdaa sawirka soo jeeda
Sidoo kale Al-shabaab waxay xuseen inuu socdo baadhitaan hordhac ah, kaas oo sida ay sheegeen ku doonayaan sidii ay u heli lahaayeen macluumaad ku waajahan fariinta uu Abu-Mansur shabakadda internetka ku faafiyey.
Arintan ayaa kusoo beegantay xilli shalay uu Abu-Mansuur Al-Ameriki fariin muuqaal ah oo mudo hal daqiiqo ah socotey soo diray Al-amriiki, taas si weyn dareen u abuurtay. Al-Ameeriki oo ah khuburada iyo hogaamiyayaasha Al-shabaab, isla markaana haystada dhalasahda dalka Maraykanka, wuxuu fariintiisa ku sheegay inuu cabsi ka qabo in la dilo kadib makrii uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya isaga iyo qaar kamid ah saraakiisha sar sare ee Al-shabaab.
Abu-Mansuur Al-Ameriki, wuxuu noqday qofka sadexaad ee u hadla Al-Qaida, sidoo kalena qofkii sadexaad ee qiray in la dilay hogaamiyahoodii Usama, waxaana intii uu Somalia joogay ee ka midka ahaa kooxdaa lagu arkayay isagoo YouTube-ka soo geliyay muuqaalo Videos, kuwaas oo muujinaya tababaro uu siinayo Al-shabaab, isagoo khabiir ku ah waxyaabaha qaraxyada iyo dilalka iyo khibrada taatikada dagaalkaba. Muqaaladaa Al-ameriki wuxuu soo deynjiray isagoo aan is qarinayn sida ay sameeyaan muhaajiriinta kale ee ka tirsan Al-qaida ee ka barbar dagaalama Al-shabaab, ama shabaabka qaarkood, balse si aan qarsoodi iyo gabasho lahayn u muuqdo wejigiisu.
Si kastaba ha Al-shabaab may dafirin muuqaalka fariinta shakiga iyo cabsida ku beertay Al-Amerki, iyadoo Al-Ameriki fariinta ku xusay inuu jiro khilaaf. Sidaa awgeed Al-amerki waxa suurta gal ah inay kooxda Al-shabaab uga shakiyeen inuu la shaqaynayo cid kale, ama kuwa kasoo horjeeda ee ugaadhsnaya. Ururweynaha Al-qaida oo hogaamiyahoodii lagu dilay 2 May 2011, dalka Pakistan, waxa sanadii u danbeeyay soo waajahay weeraro lagu bartilmaameedsay hogaamiyaal waaweyn oo ka tirsanaa Al-qaida, kuwaas oo qaarkood lagu laayay weeraro maraykanu ka fuliyay koonfurta Somalia iyo meelo kale, waxayna sheekada Al-ameriki muujisay dareen shaki xanbaarsan iyo inuu jiro shaki ay ka qabaan Al-shabaab qaar ka mid ahi muhaajiriinta iyo kuwo kale oo ka barbar dagaalama.